Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-Social Media Njenge-Superhero! | Martech Zone
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-Social Media Njengeqhawe
NgoLwesine, July 28, 2016 Douglas Karr
Abakhangisi bayaqhubeka nokubona imiphumela emihle ngemithombo yezokuxhumana yokwakha ulwazi lomkhiqizo, ukuguqulwa kokushayela, nokwakha ubudlelwano namathemba namakhasimende. Anginasiqiniseko sokuthi imboni eyodwa isondela ekubhekeni umthelela omkhulu wezokuxhumana obonwa ngabathengisi bemicimbi.
Lapho ukwazi ukungena emithonjeni yezokuxhumana ngokwakha ukuqwashisa, abangani ababelana ngomcimbi nabanye abangane bashayela ithrafikhi emangalisayo. Futhi uma sikulo mcimbi, ukwabelana ngesipiliyoni sethu kusisiza ukurekhoda lezo zinkumbulo, sabelane ngazo ku-inthanethi nabantu abanemicabango emibili ngokungayi (ngalesi sikhathi), bese siqhubeka nokwakha ukuqwashisa.
I-Facebook ikhiqiza “ukuthandwa” okuyizigidi ezi-4 njalo ngomzuzu owodwa, kanti i-Twitter igabisa cishe ama-tweets ayizigidi ezingama-500 usuku ngalunye Lezi zibalo zakamuva nje zikhombisa ukuthi anamandla kangakanani la mapulatifomu nsuku zonke, futhi kuphinde kudale nethuba lokwakha ubudlelwano obuhle nabanye abantu ochwepheshe bemicimbi, abahleli, izikhulumi kanye nalabo abangaba khona. Akekho uchwepheshe womcimbi okufanele angazinaki lezi zingxenyekazi, ngoba amandla abenawo abaluleke kakhulu ekwakheni nasekukhangiseni imicimbi eyimpumelelo. Abadali Bemicimbi kaMaximillion
UMaximillion ushicilele le infographic, Amaqhawe Omphakathi akhona ngokukhangisa komcimbi ukusiza abathengisi ukusebenzisa amandla wokumaketha ezinkundleni zokuxhumana ngaphambi, ngesikhathi nangemva komcimbi wakho. I-infographic ihamba ngamasu wenethiwekhi ngayinye yezenhlalo:
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi kuFacebook - Dala ikhasi lomcimbi, sebenzisa izikhangiso ze-Facebook ukukhomba abakhona esifundeni abanentshisekelo, ukuqhuba umncintiswano, ukulandelela uqobo, nokubandakanya inethiwekhi yakho. Ngingeza futhi ukuthi kubalulekile ukwabelana ngomcimbi bese wabelana kabusha izibuyekezo zakho zababekhona!
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-Twitter - Dala i-hashtag yomcimbi oyingqayizivele, elula futhi uyixhumanise ngayo yonke into oyibambisene nayo, cela izikhulumi ukuthi zibambe izingxoxo ze-Twitter ngokubambisana, zithole futhi ziphinde zibhale izingxoxo ezisebenzayo phakathi nomcimbi, zenze uhlu lwe-Twitter lwabaxhasi, izipikha nababekhona, futhi wakhe ubudlelwane phakathi kwabo bonke.
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-LinkedIn - Shicilela okuthunyelwe kokuqukethwe mayelana nomcimbi, nikeza ngezibuyekezo ezijwayelekile eziholela emcimbini, sebenzisa Imilayezo Eqondile ukukhuthaza umcimbi kwinethiwekhi yakho, dala ikhasi lokubonisa, bese udala Iqembu Lomcimbi lokuxhumana okuqhubekayo nengxoxo.
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-Pinterest - Dala umhlahlandlela womcimbi, khuthaza abaxhasi bakho, engeza amabhodi akho kuwebhusayithi yakho, dala amabhodi ezihloko nezimo zomcimbi, futhi uhlanganyele nabalandeli kuwo wonke.
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-Instagram - Sebenzisa i-hashtag yomcimbi wakho kukho konke ukubuyekeza, yabelana ngezithombe namavidiyo ukukhuthaza umcimbi, ukusingatha umncintiswano wezithombe, ukuhlanganisa nokwabelana kuwo wonke amanye ama-akhawunti wakho wokuxhumana nomphakathi, futhi ukhuthaze abaxhasi bakho nezipikha.
Ungayikhuthaza Kanjani Imicimbi ku-Snapchat - Sebenzisa izici zezindaba, dala umncintiswano we-selfie, wakhe ubudlelwano bomcimbi wokuthumela, thumela umyalezo kubalandeli bakho bese uzibandakanya ngqo nababekhona emcimbini.
Ngihlala ngimangazwa ukuthi imicimbi eminingi kangaka iswele izinsiza zokusebenzisa ngokuphelele imithombo yezokuxhumana ngaphambi, ngesikhathi nangemva komcimbi. Kuyaphazamisa ikakhulukazi uma umcimbi wakho ujwayelekile! Ungakha isifiso esimangazayo nokwabelana ngamandla kuwo wonke umcimbi ... futhi amathemba azoqiniseka ukubhalisela olandelayo ngemuva kokubona abakulahlekile!
Uma konke lokhu kuzwakala njengethani lomsebenzi, cela amavolontiya athile! Abangaphakathi nabafundi bayamangalisa ezinkundleni zokuxhumana futhi imvamisa abanayo imali yokuhambela imicimbi abangathanda ukuyenza. Ukuhweba okuhle kunikeza ukufinyelela kwamahhala nehembe elimnandi labasebenzi kumcimbi futhi libavumele bakhululeke ezinkundleni zokuxhumana!
Tags: ukudayiswa komcimbiFacebookinstagramLinkedInPinterestukugqugquzela imicimbi ezinkundleni zokuxhumanaSnapchatsocial mediaezokuxhum ukumaketha komcimbiukukhuthazwa komcimbi wezokuxhumanaTwitter
Isimo Sokumaketha Kwe-Agile ngo-2016